कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: नयाँ फर्मुला
आफ्नो दलको कार्यकर्ता र नेताहरूलाई धनी बनाउन नयाँ फर्मुला आवश्यक भएको छ । स्रोत साधन र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देशमा नेपाली जनतालाई धनी बनाउन नयाँ फर्मुला भए पुग्छ । तर त्यो नयाँ फर्मुला के होला, कसरी लागु होला ? अझ भनौ देशमा क्रियाशिल अन्य दलहरूलाई पनि मान्य हुने राजनीतिक सहमतिको नयाँ फर्मुला ल्याउन लागेको खुलासा हैटौडामा सम्पन्न एकिकृत माओवादीको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नु भएको छ । यो नयाँ फर्मुला कम्यनिष्टका महान गुरु माक्र्स र माक्र्सवादसँग पनि सापेक्ष नै होला । किन कि माक्र्सवाद भनेको कुनै जड हैन । यो त नयाँ नयाँ ठाउँ र परिवेश वा परिस्थितिसँग परिवर्तनको लागि सिर्जनशीलता लागु गर्ने कुरा पनि हो । यसको अर्थ कुन परिवेशमा कुन फर्मुला लागु गर्ने भन्ने कुरासँग मिल्दोजुल्दो रहेछ ।
यही नेपाल हो जुन बेला १०४ वर्ष जहाँनिया राणाहरूले नेपाली जनतामाथि शासन गरे । यही नेपाल हो जहाँ पंचायत निरंकुश एकदलीय व्यवस्थाले पनि ३० वर्ष नेपाली जनतामाथि शासन लाडे । यही नेपाल हो २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजा सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र लागु भएको थियो । नेपाली काङग्रेस र नेकपा एमालेले पालो पालो शासन गरे अझ भनौ पंचायतका हस्तीहरू लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सूर्य बहादुर थापाले समेत प्रधानमन्त्री चलाए । त्यसबेला पनि सायद नयाँ फर्मुलाले नै काम गरेको हुनुपर्दछ । अहिलेको यही नेपाललाई नयाँ फर्मुला अनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ नामले विभुषण गर्दै कहिले माओवादी, कहिले नेकपा एमाले लगायत धेरै दलहरूले सरकार चलाए । एकिकृत नेकपा माओवादीले यही नयाँ फर्मुला अनुसार मधेश दलहरूसँग चारबुँदे सहमती गरी सरकार चलाए । त्यसैले सरकार पाउन र चलाउनको लागि पनि नयाँ फर्मुला आवश्यक छ । सरकार टिकाउन पनि नयाँ नयाँ फर्मुला आवश्यक हुने रहेछ । यसरी नयाँ फर्मुला बनाउने काममा प्रचण्डलाई मान्नै पर्दछ । कहिले नयाँ नेपालको बनाउन, कहिले नयाँ संविधान बनाउने नाउँमा जनताको मत तान्न, जनतालाई झुक्याइ ठुलो दल बनाउन पनि नयाँ फर्मुला आवश्यक छ, कहिले बहुमतिय नाउँमा, कहिले सहमति नाउँमा सरकार हथ्याउन पनि नयाँ फर्मुला आवश्यक हुने रहेछ । अव दलको सातौ महाधिवेशन पछि आर्थिक क्रान्तिका नारा दिदै के के नयाँ र्फमुला ल्याउने हो, हेर्न बाकी छ ।
हुन त नेता भनेको सिर्जनशील हुनुपर्दछ । कामले सिर्जनशील भयो भने सुनमा सुगन्ध हुुनेछ । कामले नभए कुराले भए पनि सिर्जनशील भए जनताको मन तान्न सकिने रहेछ । कुन ठाउँमा के बोल्ने, कुन सभामा के नभन्ने, देश अनुसार भेष बदल्न, ठाउँ अनुसार कुरा राख्न, भनेको कुरा छिनमा फेर्न, आफुले भनेको कुरा अरुतिर मोड्न जानेन भने ऊ नेता भएर खाँदैंन भन्ने गरिन्छ । सोझो मान्छे नेता हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्न गर्ने गर्दछन् । गुट नभएको नेता माथि जान सक्दैन । दल नभएको मान्छे मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने आजको यर्थाथलाई बुझेर देश चलाउन, कार्यकर्ता टिकाइ राख्न, अझ भनौ आफु अध्यक्ष नेता भइरहन नयाँ नयाँ फर्मुला आवश्यक हुन्छ । विपक्ष दलहरूलाई अलमलाई राख्न वा बाबुराम सरकार बचाइ राख्न पनि नयाँ फर्मुला आवश्यक हुन्छ । यो कुरा सबै जनतालाई चेतना भया ।